Agüero oo sharaxay waxa ay Man City u baahan tahay si ay ugu guulaysato Champions League – Gool FM
Bernardo Silva oo cadeeyay go’aankiisa ku aadan u dhaqaaqista Barcelona
Sterling oo Man City ku qasbaya in Real Madrid ay la gasho loolan dhanka suuqa ah
Fabrizio Romano oo shaaca ka qaaday go’aanka Man United ee ku saabsan fikradda bixitaanka Ronaldo
Ian Rush oo shaaca ka qaaday doorkii uu ku lahaa ku qancinta Salah in uu sii joogo Liverpool
Ronaldo oo u sheegay Man United go’aan aan gambasho laheyn ee ku aadan mustaqbalkiisa
Chelsea oo awoodeeda dhan isugu geynaysa sidii ay ku soo afjari lahayd heshiiska Sterling
Barcelona oo si cad u sheegtay in aysan horumarin doonin dalabkooda Ousmane Dembele
De Ligt oo muujiyay tababaraha uu xiiseynayo inuu ka hoos shaqeeyo haddii uu ka tago Jiventus
Manchester United oo ku dhow inay la soo saxiixato kubad sameeye heer-sarre ah
Dajiye May 27, 2022
(Manchester) 27 Maajo 2022. Halyeeyga kooxda Manchester City ee Sergio Agüero ayaa ka hadlay arimo badan oo ku saabsan kooxda Sky Blues iyo waliba kubbada cagta adduunka, wuxuuna ku macneeyay in City ku guulaysiga Champions League ay tahay wax dhici doona sanadaha soo socda.
Manchester City ayaa laga ciribtiray semi-finalka Champions League kaddib markii ay guuldarro 3-1 ah ka soo gaartay Real Madrid, laakiin waxay xilli ciyaareedkooda ku soo gaba-gabeeyeen si heer sare ah iyagoo ku guuleystay horyaalka Premier League.
Halyeeyga kooxda Manchester City ee Sergio Agüero ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Marka la eego Champions League, tani waa shaqo aad u weyn, laakiin kubada cagta ayaa ku saabsan kooxda, kaliya maahan ciyaartoyda, marka kooxda oo dhami ay shaqeyso, koobkan waa la gaari karaa.”
“Waxaan filayaa in khibrada Manchester City ay kor u kacday dhowrkii sano ee la soo dhaafay, ku guuleysiga Champions League waa wax la gaari karo si dhaqsiyo leh.”
Weeraryahanka reer Argentina oo ka hadlayay imaatinka Halland wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa inuu yahay saxiix weyn, waa ciyaaryahan ka qeyb qaadan kara gooldhalinta, waxaan filayaa inuu ku guuleysan doono England, inkastoo uu u baahan doono waqti uu kula qabsado, laakin kalsooni ayaan ku qabaa. in uu shaqadiisa si wanaagsan u gudan doono.”
“Hadalkaaga waa waxyeelo” – Messi oo si adag ugu jawaabay madaxweynaha Barcelona